▷ IMarseille Tarot kwi-Intanethi | Ukusasazeka kweKhadi SIMAHLA | 2019
Ukuba ufuna ukwazi ikamva kunye nexesha langoku likuphathele ntoni ebomini bakho ngokucacileyo, ungahambi. ndiza jula i amakhadi e-tarot ukusuka eMarseille free ngokupheleleyo kuwe. Ndiza kucacisa onke amathandabuzo onokuba nawo malunga nolu hlobo I-tarot ephakathi.
Awuyi kulahla nto phumla ingqondo yakho kwaye ulawule ukuphefumla kwakho, zilungiselele ulwazi endiza kukunika lona. bucala ngasekhohlo itarot ibizwa ngokuba yiMarseille ngenxa yemifanekiso yexesha eliphakathi kunye namagama kulwimi lwesiFrentshi analo. Sukuba nexhala, isebenza kubo bonke abantu abanamathandabuzo ebomini babo. Kukhululekile ngokupheleleyo!
1 Ukusasazeka kweKhadi leMarseille Tarot
1.1 UAlejandro Jodorowsky kunye neCamoin
1.2 Imvelaphi yetarotille yaseMarseille
1.3 Intsingiselo yeeleta zaseMarseille
Ukusasazeka kweKhadi leMarseille Tarot
Ukuba ulapha kungenxa yokuba ngexesha elithile ebomini bakho wawunamathandabuzo, okanye unawo ngoku, kwaye kufuneka uye qhagamshelana ne-tarot. Ukuba ndithetha ngawe, ndincoma ukuba ubonisane nale nto Oracle kwi-intanethi. Njengoko i-tarse yaseMarseille yenye yezona zidumileyo kubo bonke abo bantu bafuna ukufumana indlela yesiphelo sabo.
UAlejandro Jodorowsky kunye neCamoin
Ngubani Alejandro Jodorowsky? Kwaye iCamoin? Konke kubuyela eMarseille (eFrance) apho aba bantu badibana khona buyisela itemplate yekhadi ngeepleyiti zakho zokushicilela.
Bachitha bonke ubomi babo (ngaphezulu kweminyaka engama-30) bechaza intsingiselo yemfihlakalo Intsingiselo yokwenyani yomfanekiso ngamnye kunye nokutolikwa okunokubakho ngexesha lokuphosa amakhadi eMarseille phezu kwetafile.
Umnumzana Jodorowsky wadibana neCamoin embindini weParis, ukucacisa lo mfihlelo owawusebenza kangangeminyaka emininzi, usetyenziselwa injongo yokuprinta Itarot yaseMarseille. Babuye babuyisela zonke iidesika, bahlaziya imifanekiso kunye neempawu zokutolikwa kwexesha elizayo.
Imvelaphi yetarotille yaseMarseille
Ngexesha lokufunda Imvelaphi yokwenene yetarot yaseMarseille luphawu lombuzo kwabo bayifundileyo. Ngapha koko, kwaigama elifanayo I-tarot imvelaphi ayaziwa kwaye ulwimi ekubhalwe ngalo alwaziwa.
Kwangokunjalo UJodorowsky Ndibhala incwadi "Ubugcisa beTarot«, Apho kwathiwa kwinkulungwane yeshumi elinesixhenxe itotot yafunyanwa ngaphakathi kwabagwebi bamathuba, ukuze kamva ikhule njenge-esoteric kwikamva.
Kwaye kwathiwa Amakhadi ama-22 I-arcana enkulu Ukusuka kwitarot yaseMarseille yayizii-hieroglyphs zamandulo zase-Egypt.
Esinye isazinzulu ebizwa ngokuba ngu-Etteilla, wathi ukubhula ngamathambo kwakuhambelana neempawu zeenkwenkwezi. Konke ngaphandle kokulibala ukuba in imibutho eyahlukeneyo eyimfihlo kunye nenkolo ibanga ukwenziwa kwetharot yaseMarseille eyahlukileyo neyakhe.
Kwinkulungwane yeshumi elinesixhenxe babebaninzi abenzi bobubi phrinta i-tarot yaseMarseille, Ikopi nje yomdlalo wokuqala.
U-Oscar Wirth wayengumphengululi kunye nomlingo kwinkulungwane edlulileyo eyathi umdlalo wekhadi lemarseille, yayiyinguqulelo esezantsi kune Ithebhulethi yaseGebelin. Amabango akhe kamva afunyaniswa ebubuxoki.
Intsingiselo yeeleta zaseMarseille
Olu hlobo lwetarot lusekwe kwi Iidesika ezingama-21, eyaziwa njenge Omkhulu uArcana, ezi zinenani lesiRoma. Kodwa itarot yaseMarseille yahlukile kwezinye Uphambene.
Ngokomyalelo owabelweyo la ngamagama abo:
Uyaphambana, umele entsha
Wizard, amandla ngokupheleleyo
Pope, ukubakho khawula
UKumkanikazi, ukuvumelana, ulungelelwano ngokweemvakalelo
Umlawuli, amandla ezinto emhlabeni
Upopu, amandla yokomoya
Ngothando, uthando kunye sibini
Imoto, mpu melelo, uhambahamba
Ubulungisa, ubungqongqo nobulungisa
IHermit, efundayo, Ukubonakalisa nobulumko
Ivili leThamsanqa, iziganeko, ukuguquguquka kwamandla nezinto ezothusayo
Amandla, ithamsanqa kunye nethamsanqa,
Ukuxhoma, ukungabi namdla, ukuzincama nokuzincama
Ubushushu, ukuzeyisa, ubuhlobo nenkxaso
Iphelisiwe inqaba, iingxaki, intshabalalo
Inkwenkwezi, ubuchule, ubuhle nonxibelelwano
Nyanga, ukudideka, isidingo sotshintsho
Ilanga, ulonwabo, uxolelwaniso, UManyano
Umgwebo, umahluko zezokomoya neziphathekayo
Ihlabathi, uloyiso, ukuzaliseka, impumelelo
Umdlalo wonke weqonga wenziwe ngee-78 decks, njengoko besitshilo Ngama-56 amancinci eArcana. Ezi zinto ziqulathe igolide, amakrele, iiklabhu kunye neewands:
Masibone eyakho intsingiselo ngokubanzi:
Bastos: Fuzisela amandla, ubudoda, igunya kunye nobundlongondlongo.
Iindebe: Ithetha ngamandla amnandi kunye neemvakalelo ezintle, ukulunga, uthando, uvuyo, inceba kunye nolonwabo.
Iinkemba: Bamele umlo, imfazwe, ubulungisa kunye nesibindi, kodwa ngokudityaniswa namanye amakhadi banokuthetha iimvakalelo ezimbi ezinje ngokuhanahanisa, ukunyelisa kunye nelishwa.
Igolide: Bacacisa igunya, impilo, imali kunye nokuzinikela.
Amakhadi amabhinqa: Bavavanywa ngamanani II, IV, VI kunye ne-VII.
Amakhadi angamadoda: Ifanekiselwe ngamanani III, V, VII kunye no-IX.
Los Omkhulu uArcana Zisetyenziselwa icandelo le-psychic (imeko yengqondo) kunye nenxalenye yokomoya. Ukubhekisa kwi Indaleko yomntu kunye neemvakalelo ezimele oko.
Unobumba ngamnye we Umgangatho wetarot de Marseille odlala amakhadi zidityanisiwe enye nenye, kuthathelwa ingqalelo intsingiselo nganye ngaphandle kokunwenwa.
Umgangatho wonke kuvavanywa uwonke kwaye intsingiselo inokuba njalo ezilungileyo nezimbi ngaxeshanye. Umfundi we-tarot kufuneka alinde Zonke iidesika ezikhethiweyo kumbuzo ziyavela ukunika impendulo ethembekileyo ngaphandle kokwenza izigqibo zokuziphatha.
Kufuneka idluliselwe kumntu odibana ne Uhlalutyo lokusasazeka kwitotot yaseMarseille ihlala isekwe kwiziphumo nakwintsingiselo yekhadi ngalinye. Ngonaphakade Ukuhlalutya zonke iinkcukacha ngaphandle kokushiya nantoni na kumbhobhoUkushiya iinkcukacha ezincinci ukuxela kwangaphambili kuya kuba kokungalunganga.
Ukuba umfundi we-tarot uziva evalekile okanye engathandabuzeki, kunjalo Uyacetyiswa ukuba uphinde ikhadi lokufunda. Kungenxa yokuba enkosi kumakhadi aseMarseilles, ii-enigmas obungazazi ziya kuchazwa.
Isigqibo kufuneka senziwe nguwe nangayiphi na imeko, i-tarot iya kukuxhasa kwaye ivule iindlela, ke unokukhetha eyona ilungele ubomi bakho. Ulindeleni ukuba ucofe kumakhadi owathandayo?